Lamina fanao amin'ny baskety ho an'ny tovovavy sy vehivavy feno - mainty sy fotsy, kisary ary kavina
Blouse miaraka amin'ny Basque - amin'ny inona no mampiavaka ity endriky ny palitao kanto ity?
Vitsy ny olona no mahatsiaro fa ny Espaniola dia toy ny singa iray amin'ny akanjo toy ny olona niseho tany Espaina. Nandritra ny taona maro dia nanjavona izy avy eo amin'ny tontolo lamaody, avy eo niverina indray, fa nanomboka tamin'ny taonjato faha-18 kosa, dia nisy blaody mahaliana iray misy balkon iray niseho tao amin'ny gara vehivavy, izay ahafahanao manao sary maoderina maro. Izany zavatra izany dia afaka manala avy hatrany ny fomba fitafiana sy ny hakantony .
Blouses amin'ny Basque 2017
Fiteny mody amin'ny baskety - ny fahavaratra 2017 - mbola marevaka sy tsy mahazatra ny fihenan-java-maneno, izay manintona indrindra ny mijery malaza sy mafana fo. Io akanjo io amin'ny akanjo rehetra dia mitondra fifaliana sy firaisana tsy manam-petra. Ankoatra izany, tokony ho ao am-paladia tsara tarehy izy, izay te-hiafina amin'ny kibony mivangongo sy ny andilany.
Ao amin'ny fanangonana fitafiana amin'ny lohataona, Chanel, Roberto Cavalli ary marika marobe malaza, ny akanjo miboridana dia nanjary tena endrika tanteraka amin'ny endriny. Ohatra, ny sarimihetsika frantsay Carven dia nanolotra sary maromaro noforonina tamin'ny faha-60 taonany ary feno firaiketam-po manokana. Ny lambam-pandriana dia miloko marevaka maro, izay miteraka fahatsapana lanja sy tsy fahampian-tsakafo - izay ilainao mandritra ny fahavaratra, ary ny loko fotsy dia nanjary mpanjaka amin'ny lampihazo. Ao amin'ny fanangonana ny lohataonan'i Chanel Karl Lagerfeld dia naneho sary maro mampihetsi-po izay ahitana akanjo tsy maotina sy fitarihana.
Tamin'ny herinandro momba ny lamaody tany New York, ny firaiketan'ny kristianina Siriano dia nihoatra ny akanjo goavam-be, izay nanome endrika sary manjavona izay nanokatra ny endriky ny fon'ny vehivavy ho an'ny hafa. Ny akanjo mivelatra miaraka amin'ny baskety sy ny tsipika kely amin'ny soroka dia tonga lafatra ho an'ireo izay te hanome sarin'ny firaisana ara-nofo. Mafy amin'ny fanamarihana vehivavy eo amin'ny fitafy? Avy eo dia mampivelatra ny anjarany amin'ny maha-lahy sy maha-vavy azy miaraka amin'ny fanampian'ny ratsantanana be loatra amin'ny milina miaramila avy amin'i Marc Jacobs.
Lamba mamy miaraka amin'ny baskety
Ny akanjo marevaka amin'ny baskety dia modely tsy manam-paharoa azo atao amin'ny fivoriana fivarotana, mandeha amin'ny namana, ary daty mahafinaritra. Ity hatsaran-tarehy ity dia ho an'ny tarehin'ny rehetra, saingy amin'ny safidiny dia zava-dehibe ny handinihana ireo loko marobe izay tsy mitsahatra ny mamerina ireo mpilalao stylists amin'ny indostrian'ny lamaody:
Ho an'ny zazavavy miaraka amin'ny karazana "blondina" maniry miaraka amin'ny baskety dia tokony hikorontana amin'ny fihodinan'ny visa ny lambany. Mba hanaovana izany, zava-dehibe ny fisafidianana akanjo izay ahafahan'ny basketsika roa santimetatra ambony na ambany ny ampahany betsaka amin'ny fihodinana.
Ny "Stylized triangle" dia manoro hevitra mba hanome lanja ny zavatra misy baskety, mivantana eo amin'ny tsofa. Amin'ity tranga ity dia ho azo atao ny mihabetsaka kely amin'ny fihodinana, mametraka ny endriny ho moana sy ny vehivavy kokoa.
Ny hatsaran-tarehy plus-size, ny dikanteny - lamaody lamaody miaraka amin'ny Basque malaza, fa tsy manosihosy. Raha tsara indrindra, raha loko maizina. Izany dia hahatonga ny silhouette ho mirindra, ka hampitombo ny fihaviany.
Lasi blazie amin'ny baskety
Ny blouse amin'ny baskety sy dantelina dia hamadika anao ho sary mahazatra. Ny famirapiratana mahafinaritra dia tsy milamina mihitsy. Ity dia akanjo mareva-doko izay hanasongadina ny hatsaran'ilay tovovavy rehetra te-hijery tsara amin'ny toe-javatra rehetra. Raha adala ianao amin'ny zava-misy ao amin'ny fomba Victoriana, dia aoka ho azo antoka fa manandrana mamelatra akanjo marevaka malefaka miaraka amin'ny kofehy mofomamy vita amin'ny velvety, miaraka amin'ny tsangatsangatsanganana lafo (ASOS). Ary i Selected dia nifantoka tamin'ny fomba tsotra sy miaraka amin'ny famolavolana rafitra izay mety amin'ny fifandraisany amin'ny zavatra hafa.
Ny Miss Selfridge, fanta-daza amin'ny fombafomba tsy maotina, saingy tena mahavariana, dia manolotra ny lamaody mba hanandrana akanjo izay mifanandrify amin'ny hetsika hariva, ary ho an'ny sary iray maharitra andro maro. Ny lamosin'ny lamosina miaraka amin'ny baskety sy ny kavina avo dia hanandrana ireo izay hozahan-javatra manan-danja ao amin'ny tarika. Tsy azo atao ny tsy hianjera amin'ny akanjon'ny Religion Plus, izay mibanjina tsara ny hatsarana rehetra amin'ny endrika mahafinaritra. Ny marika Atsinanana-Londres dia nanitatra ny famaranana ny lohataona amin'ny lohataona miaraka amin'ny famoronana tsotsotra malaza manerantany amin'ny dantelina mangarahara.
Ny Chi Chi London indray dia manaporofo fa na dia ny akanjo mainty miaraka amin'ny baskety aza dia afaka mijery tsy mahazatra. Mba hanaovana izany, mila ampianarina antsipiriany lamaody ianao - sary sokitra amin'ny soroka sy tsipika amorom-patana. Ireo mpaka sary tanora fantatry ny renirano River dia mahalala ny fomba handresena ireo tovovavy, manampy ny fanangonana akanjo miaraka amina ravina. Ny blozy manana baolina mahaliana dia tsy mahazatra, noho ny zavatra manampy azy hanasongadinana ny endriky ny zatovovavy.
Blouse misy baskety eny an-tsoroka
Ny akanjom-boninahitra Summer amin'ny baskety dia vita amin'ny dantelina, kodiarana, sehatra na mangarahara vita amin'ny lamba. Tsy hoe mahasarika fotsiny ianao fa tsy mahatsapa fa hafanana marina ny varavarankely. Ity fahavaratra ity, aza matahotra ny manandrana manandrana ny fomban-drazana tsy mahazatra, ny loko asymmetrika na ny loko tsy mahazatra ho anao (akanjo marevaka miaraka amin'ny loko manga malaza na loko mainty). Aza adino fa ny Basque no mahatonga ny soroka ho lehibe, ary noho izany dia mety ho an'ny tovovavy tiany izay handanjalanjana ny ohatr'ilay sary (ilay "triatra").
Lamina mody miaraka amin'ny baskety eny an-tsoroka
Blouse amin'ny Basque amin'ny tendany
Fitafy marevaka amin'ny Basque, miorina eo amin'ny tendan'akondro, maneho ny hakantony sy ny fanatsarana. Voajono amin'ny lamba malefaka sy mora vidy izy io. Ao an-tampon'ilay lazan'ny modely amin'ny fanakanana maimaimpoana maimaim-poana sy mofomamy mamirapiratra. Manompoa ny fomba nentim-paharazana, mifankatia amin'ny fijerin'ny orinasa? Tandremo ny modelin'ny crepe manga lalina nataon'i Frances Connection. Raha mora sy mendrika ny akanjonao, dia ho tianao tokoa ny lambam-pandriana maivana avy amin'i Ralph Lauren.
akanjo marevaka miaraka amin'ny basquel amin'ny tavy
Blouse miaraka amin'ny baskety roa
Ny akanjo toy ny ankizivavy Basque amin'ny ankizivavy, manaja endrika sary, dia hifanaraka tsara. Ankoatra izany, dia izy ireo no hampiavaka ny tongolobe ary hanampy amin'ny fanatanjahantena maoderina sy maoderina. Aza hadinoina fa eo an-tendron'ny lamaody-Olympus no modely manaraka:
mitambolimbolina eo amin'ny sahan'ny tanana;
avy amin'ny fitaovana mangarahara sy mamirapiratra;
amin'ny lamba manako-pery;
monochrome ary misy sary mamirapiratra.
Lovely marevaka miaraka amin'ny baskety roa
Blouse tsy misy akanjo amin'ny baskety
Ny akanjom-behivavy mivaro-kena miaraka amin'ny akanjo boribory boribory boribory dia mijery tsara ny andavanandro sy ny birao. Mba hanamboarana sarin'ny orinasa, alao sary an-tsaina ny loko miverimberina. Ny làlana misy ny arabe dia loko manga na mainty mifangaro miaraka amin'ny endritsaka vita printy, na ny felam-boninkazo mamirapiratra mitovy aminy. Raha te hijery ny takarivan'ny fofona tsara ianao, dia asio blazsy tsy misy aina miaraka amin'ny pataloha misy poizina na pensilihazo misy pensilihazo. Ao anatin'ireo accessories ireo dia manome loka ny firavaka tsy manan-danja. Amin'ny endriny, ny Basque dia efa singa miavaka amin'ny endriny.
Ankizy mamelana akanjo amin'ny baskety
Lamba vita amin'ny baskety
Ny akanjo marevaka amin'ny baskety, nohavaozina avy amin'ny kofehy, tsara indrindra ny tarehimarika, ary manasongadina ny fihodinan'ny sedra. Ny tombontsoa lehibe amin'ny akanjo vita amin'ity fitaovana ity dia rehefa tsy mitombo ny endriny mandritra ny fotoana lava dia mitazona ny endriny izy, ary tsy mahasosotra ny endrik'ilay lamba dia mena sy mampiadana. Aza hadinoina fa tokony hosasana amin'ny rotsak'orana ny akanjony.
Lamba marevaka amin'ny baskety
Blouses misy baskety ho an'ny matavy
Tadidio fa tsy tokony hifanaraka amin'ny pataloha malalaka, ny akanjo-masoandro, "klokely". Raha tsy izany dia mahazo ambany ambany sy ambony ambony isika. Ny tanjonao dia ny hamorona ny silhouette amin'ny " dayglass ". Aza anaovanao izany raha toa ka voageja amin'ny lamba mangarahara tanteraka izy, voaravaka amin'ny loko noforonina na manonta printy izay mampitombo ny taratrao. Ny bloza miaraka amin'ny baskety ho an'ny vehivavy feno dia tokony hofidiana miaraka amin'ireto manaraka ireto:
ny aoriana ny feny dia hanarona ny Baska izay lavalava sy lava loha lavitra eo anoloana;
Hanova ny faritra manontolo amin'ny feny ny alahelony;
Tsy maintsy manafina ny feny tanteraka ihany koa ny fiaramanidina maitso sy maitso ary mandanjalanja ny habetsaky ny vatana (izany dia mihatra amin'ny zatovovavy amin'ny soroka lehibe);
Ny baskazo tafahoatra dia hanafina ny vavony.
Ankizy marevaka misy baskety ho an'ny ankizivavy matavy
Amin'ny akanjo hanaovana akanjo amin'ny baskety?
Ny sary misy blousy miaraka amin'ny baskety dia manjary tsy mahafeno, raha toa ka voaorina tsara. Zava-dehibe ny tsy hanadino fa ny ambany sy ny ambony dia tokony ho monophonic na mifanohitra. Ny sary dia tsy tokony ho sarotra kokoa amin'ny fitaovana. Tsara kokoa ny manome ny minimaisma. Raha mikasika ny fampiendrehana lamaody, dia:
Ny akanjo marevaka amin'ny Basque malaza dia mijery tsara amin'ny jeans-mena;
Mijoroa amin'ny satroka misy fehikibo matevina na mifanohitra. Omeo ny endriky ny vehivavy amin'ny alalan'ny fitafy kiraro amin'ny fehiloha ambany. Raha ho anao ny tena zava-dehibe, tandremo ny trio de jeans, ny akanjo miaraka amin'ny kiraro baskety sy kiraro. Miaraka amin'ny akanjo sy jeans, ireo sipa dia mahita karipetra tsara amin'ny fomba fikajiana. Ho an'ity lookbook ity dia manisy fotsy fotsy na kiraro mainty, kiraro, sambo snorkeling, na tsy misy vidiny.
Ankizivavy marevaka amin'ny akanjobe misy baskety
Blouse miaraka amin'ny baskety amin'ny sary maoderina
Takelaka sy akanjo mipetaka amin'ny baskety
Ny akanjo fotsy misy baskety sy pensilihazo misy pensilihazo misy loko iray dia fomba tsara indrindra fampiendrehana izay mahafeno ny fironana modely modely. Nolazaina tetsy ambony io fa mifanaraka tsara amin'ny farany ambany ilay akanjo. Duo klasika izany, izay ilàna ny fisafidianana ny kiraro mety:
sambo kely eo amin'ny valizy;
kapa amin'ny tady manify.
Vahaolana lamaody - akanjo pensilihazo sy akanjo marevaka amin'ny baskety
Hantsana sy akanjo miaraka amin'ny baskety
Ny akanjo misy pôlisy koa dia toa mandresy, toy ny blouse miaraka amin'ny baskety sy jeans. Mba hamoronana fikarakarana birao, misafidiana "fantsona" maotina. Ny hatsaran-tarehy dia avy amin'ny modely klasika, ary noho izany ny ambany dia tsy maintsy mifanaraka amin'izany. Mitovy amin'ny pataloha mahitsy izy. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny latina Raha ny momba ny kiraro, dia tsy samboaran-tsambo afa-tsy sambokely fotsiny ihany, fa sandam-pahefana sy kapa mifandraika ihany koa.
Fifangaro marevaka - akanjo sy akanjo miaraka amin'ny basque
Sakafo ho an'ny vehivavy matavy
Famaranana avy amin'ny tendrontany
Stone aquamarine - toetra mahagaga
Ahoana no handraisanao ranom-boasarim-boaniho?
Lindsay Lohan dia naneho fankasitrahana ireo mpankafy tamin'ny fomba vaovao tamin'ny fety iray tao Cannes
Make-up eo ambany akanjo maitso
Tabilao tanimanga voasoratra
Nahoana no manonofy ny ankizy kely?
Disneyland any Sochi
Lehilahy Capricorn, vehivavy Aquarius - fifanarahana